Daraasadaha Kiisaska ee Mashaariicda Dhaafay & Qalab Kala Sooca Ellicott
Studies Case, Ciid Macdanta iyo Quruxda
Dib-u-soo-nooleynta Taayirada Macdanta 'Ellicott 370 Dragon® Dredge'
JAMHUURIYADDA DOMINICAN - Taariikh ahaan, geeddi-socodka macdanta ee heerarka soo-kabashada liita waxay keeneen dabo-galka tiro aad u tiro badan oo ah alaab dib loo soo celin karo. Soo saarida maaddadan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo qariidado. Waxaa jira dhowr arrimood oo cudurdaar ka bixinaya soo saarista iyo dib-u-habeynta dabada: Dabada ayaa u baahan kheyraad yar markii la barbar dhigo macdanta caadiga ah. Tusaale ahaan, wadiiqadu waxay - hal talaabo - soo saari kartaa oo ku qaadi kartaa alaabta warshad wax lagu farsameeyo oo ku taal meel u jirta labaatan kiilomitir. Tani waxay yareynaysaa kharashyada la xiriira qalabka raasumaalka, shaqada, shidaalka, iyo dayactirka. Horumarka ku saabsan dib-u-warshadaynta tikniyoolajiyadda Processing of tailing ayaa u oggolaanaysa wax soo saar dheeraad ah iyada oo aan la kordhin ...
Studies Case, Dekedaha, Dekadaha & Wadooyinka Biyaha
Qandaraasleyda carbeed ayaa shaqaaleysiiya Ellicott® Brand si gooni gooni ah si ay u buuxiyaan dalabyadooda
Mashaariicda ugu weyn ee hadda socda ayaa ku lug leh Bariga Port-Said Axial Port. Naqshadaynta iyo dhismaha deked cusub oo ku taal bariga Port Said By-pass waxay buuxin doontaa baahida laga qabo gaadiidka badda. Wejiga koowaad ee mashruuca waxaa ka mid noqon doona dhismaha marinka marinka, biyo-weeyn, weel xaddidan, kanaal gaaban, iyo ballaarinta Port Said By-Pass. Qandaraasyada ayaa la helay dabayaaqadii 1998 oo abaalmarin ayaa la filayaa dhamaadka sanadka. Dekadda-Axsaabka leh ee Dekadda-Dheeraadka ah ee la qorsheeyay waxay gaaraysaa in ka badan 100M m3. Aaggu waa 20 km2. Taasi waa sababta ...
Studies Case, Soo celinta Xeebaha
Shaqadii Kala Daynta Beerta Vineyard Haven Oo Dhameystiran
20 Febraayo 2014 Xigasho: Gaasta Vineyard Ka dib dhowr bilood oo dib u dhac ah, labo mashruuc oo qodaal qodis ah oo ku yaal Tisbury ayaa dhammaad ku dhow. Guddoomiyaha guddiga Dredge Nevin Sayre ayaa Arbacadii sheegay in shaqada laga galo iridda harada Tashmoo iyo iridda galbeed ee laga galo dekedda Vineyard Haven oo la duubay horraantii bishan. "Aad ayaan ugu qanacnay natiijooyinka," ayuu yiri Mudane Sayre. Wuxuu sheegay in ciid la dhigay xeebta dadweynaha ee Tashmoo iyo sidoo kale xeebta dadweynaha ee Grove avenue iyo Owen Little Way. "Mar labaad waxaan leenahay xeeb," ayuu yiri Mudane Sayre. “Aagga oo dhan oo ku teedsan jidka weyn ee Grove waa u qurux badan yahay socodka ...
Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel ayaa si Buuxda looga Dhaqaaqi Karaa Kadib $ 2 Milyan oo Mashruuc Qodis ah
Degmada Norfolk, VA, oo ka tirsan Ciidanka Injineerada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel oo si buuxda loo baari karo ka dib markii $ 2 milyan oo dayactir mashruuc loogu talagalay in laga saaro xaaladaha qallafsan ee ka sii darista duufaantii Sandy sanadkii 2012. Shirkadda, oo ku timid ka hor jadwalka iyo miisaaniyadda gudaheeda, ayuu yiri Andy Reid, wakiilka xafiiska qandaraaska degmada Norfolk. Southwind waxay adeegsatay 16 ″ Ellicott Series 970 cutter dredge, sawirka kore, si ay u qabtaan shaqada. Qodista dayactirka ayaa sidoo kale soo bandhigtay dib u isticmaal waxtar leh iyo meeleyn qiyaastii 112,000 yaroo jiibis ah oo ciid ah oo dhererkeedu gaarayo 6,500 cagood ...
Qulqulka Harbor Town Yacht Basin ee Hilton Head Island wuxuu umuuqdaa inuu usocdo sidii loo qorsheeyay, inkasta oo farsamo xumada, daadinta iyo dayactirka dhuumaha, sida lagu sheegay warbixinada kormeerka maalinlaha ah. Shaqadu waxay bilaabatay Dec. 4 si loo furfuro gunta doonta. Goobaha Gull Point iyo marinada South Beach iyo Braddock Cove ee gudaha Badda Badda sidoo kale waa la daadinayaa. Illaa iyo hadda, illaa 56,000 yabbaal cubic oo fayadhowr ah ayaa laga saaray kanaalka laga soo galo iyo bannaanka dibedda, sida laga soo xigtay kormeeraha hoggaamiyaha iyo maareeyaha mashruuca Larry Setzler ee injineernimada GEL. Crews ayaa shaqada ku soo laabatay jimcihii ka dib afar maalmood oo fasax ah oo lagu soo qaatay kirismaska ​​...
Saraakiisha waxay u Arkaan Harqaynta Utica Harbor inay Taariikhi u Tahay Soo Noqoshada
Waxaa laga soo xigtey: Dredging Maanta Waxaa qortay DAN MINER UTICA, NY (WKTV) - Laba sano gudahood, waxaad bilaabi doontaa inaad aragto makhaayado, dukaamo tafaariiqle ah iyo hudheel laga yaabo inuu ka soo muuqdo Marsada Utica. Qoditaanka dekedda ayaa bilaabatay bishii Sebtember waxayna ahayd inay sii socoto sanadka cusub. Si kastaba ha noqotee, Magaalada Utica iyo mas'uuliyiinta gobolka waxay heleen hadiyad Kirismas ah Khamiistii. Carmella Mantello, oo ah Agaasimaha Hay'adda Kanaalka ayaa tiri: "Waxay ku sameeyeen waqti rikoor ah. Waxaan qiyaasnay ​​qiyaastii afar bilood si aan u soo caaryo. Waxay ku sameeyeen wax ka yar laba bilood. ” "Ma qaadan qandaraas gaar ah," ayay tiri haweeneyda ...
Qodida Macdanta Gaarka ah - "Hydro-Quebec"
Milkiilaha: Quebec Hydro-Electric Commission, Canada MAGAALADA MADAXWEYNAHA: Hull Xajmiga - dhererka cagaha 220 ′ Qodista Ugu Badan ee Qoto dheer 90 Size Cabbirka Cabbitaanka - Aqoonsiga 42 ″ Cabbirka Tuujinta Dheecaanka - ID 36 ″ Dredge Pump Horsepower 8000 Excavator Horsepower 1000 Wadarta Lagu Kordhiyey Awooda 10,000 MACLUUMAADKA MASHRUUCA: Guddiga Quwada-Korontada ee Quebec waxay bilaabeen inay qorsheeyaan horaantii 1925 si ay u dhisaan kanaal cusub, kaasoo qaadanaya ficil ahaan socodka qulqulka wabiga St. Lawrence, sidaasna looga dhigayo wax soo saar koronto joogto ah oo la heli karo ku dhowaad 1,600,000 kilowatts. Kanaalkani wuxuu ahaa inuu dhererkiisu ahaado 15 mayl, ballaciisuna yahay 3300 dhudhun iyo 27 dhudhun oo hoose. Waxyaabaha la qodayo ...
Meelaha Macdanta Gaarka ah ee Macdanta - "Guaycura" iyo "Pericue"
Milkiilaha - Roca Fosforica Mexicana SA de CF (ROFOMEX), Mexico QAYBTII UGU DANBEEYEY: Xajmiga Cabbirka - dhererka cagaha 108 ′ Qoto Dheer Ugu Qoto Dheer 58 Size Cabbirka Tuujinta Neefta - ID 27 Size Tuubo Cabbirka Dheecaanka - ID 24 ″ Dredge Pump Horsepower 1500 Excavator Horsepower 500 Wadarta Isku xidhka Awoodda 2050 MACLUUMAADKA MASHRUUCA: Bishii Juun 1981 labadii mataano ee 'Guaycura' iyo 'Pericue' ayaa lagu baabtiisay Baltimore Roca Fosforica Mexicana SA de CF (Rofomex) ee Mexico. Rofomex-kii loo yaqaan 'Rofomex' waxaa loogu magac daray laba qabiil oo Hindi ah oo maxalli ah, "kuna soo biirista dhaqammadii hore ee jasiiradda la teknolojiyada casriga ah". Taxanaha Ellicott Brand 3000E ee koronto ku shaqeeya "Super-Dragon®" ayaa la isticmaalay ...
Qodista Macdanta Gaarka ah ee Gaarka ah - "Sandpiper"
Milkiilaha - EI DuPont de Nemours & Co., USA QAAS LOOGU TALAGALAY MADAXWEYNAHA: Cabbirka Hull - dhererka cagaha 165 ′ Qiyaasta ugu badan ee Qoditaanka 50 Size Cabbirka Cabbitaanka - ID 23 Xogta Mashruuca Horsepower 23: DuPont, oo ah shirkadda ugu sareysa kiimikada Mareykanka iyo soo saaraha ugu weyn adduunka ee titanium dioxide (TiO4800), ayaa dhowaan dhameystiray mashruuc malaayiin doolar ah oo lagu ballaarinayo howlaha macdanta ee Florida iyadoo la furayo goob cusub oo u dhow Maxville. Ellicott® nooca cusub ee loo yaqaan 'allicott® brand' iyo warshad uruurinta la socota ayaa kordhiyay wax soo saarkooda 1450% waxayna kordhin doontaa nolosha miinada ...
Cape waxay dhammeystireysaa marxaladda koowaad ee Waddo-mareenka Koonfur-galbeed
Cape Coral, Florida Xigasho: Cape Coral Daily Breeze Magaalada iyo shirkad qodeysa dhoofinta ayaa dhameystiray wajigii koowaad ee qorshe guud oo lagu maareynayo qashin qubka maareynta dhammaan nidaamka kanaalka magaalada. Michael Ilczyszyn, maareeyaha ganacsiga ee magaalada, iyo Jack Adams oo ka tirsan Gator Dredging ayaa u soo bandhigey Golaha Magaalada intii ay ku guda jireen aqoon isweydaarsigii ay ku yeesheen hoolka shirarka ee City Hall qorshahooda ay ku doonayso inay ku yareyso dadka ku nool koonfur-bari. Bandhigga oo dhan, dhammaan 179 bog, ayaa laga arki karaa khadka tooska ah. Adams iyo Ilczyszyn ayaa siiyay golaha waxyaabaha ugu muhiimsan. Qeybta koonfur-bari, oo leh 349 kanaallo magac leh oo ku yaal 115 mayl, waxay ku taal koonfurta Hancock Bridge Parkway iyo bariga ...